Yakanakisa App Kuti Utore Vanyoreri PaYouTube ➡ ➡️ Vateveri ▷ ➡️
Dai 12, 2021 0 mashoko 616
Vanhu vazhinji uye vazhinji vari kudzidza mukana wekugadzira yavo yega YouTube chiteshi uye tanga kuita mari kuburikidza nechikuva ichi. Kana iri yako kesi, ngatitaurire iwe kuti iwe uchazoda rubatsiro rwevanonyoresa. Ndosaka nhasi tichikuratidza dzimwe nzira dzekuwana vateveri vatsva paYouTube.
Vanyoreri kiyi mukati meYouTube. Iyo chikuva inoda huwandu hushoma hwevateveri kuti vakwanise kuita monetize chiteshi chedu uye nekudaro wotanga kuwana mari yekugadzirwa kwezvinhu zvekuona uye zvekuona. Kune zvimwe zvikumbiro zvinogona kutibatsira kuwana vanyoreri uye apa isu tinokuudza iwe kuti ndeapi akanakisa.
Kukura paYouTube hakusi nyore
Vazhinji vashandisi veYouTube chikuva vari kuita mari nekungoisa zvirimo kune ichi chishandiso, zvisinei, chinhu chimwe chinofanirwa kujekeswa uye ndizvo kukura paYouTube hakusi nyore sekufunga kwevamwe.
Kuti uwedzere vanyori vatsva kuchiteshi chedu zvichave zvakakodzera kuisa mari yakawanda mukati meplatifomuAsi haasi munhu wese anokwanisa kushandisa maawa achigadzira zvemukati zveapp. Muzviitiko izvi rumwe rubatsiro runenge rusiri rwakaipa.
Ndokusaka nhasi tichida kukuzivisa iwe mamwe ekushandisa kwakanakisa kuti uwane vanyoreri paYouTube. Ivo havazotiitire basa rese isu, asi ivo vachatibatsira isu kuti tiite iro basa rekuwedzera vateveri risina kuomarara uye kufinha.
Pamusoro akanakisa maapplication
Pawebhu tinowana runyorwa rwakakura rwezvishandiso zvakagadzirirwa kuwana vanyoreri paYouTube. Kune zvimwe zvinoshanda uye zvakavimbika, nepo vamwe vachingopa vimbiso dzenhema.
Tinounza kwauri kumusoro neakanakisa mafomu kuwana vateveri paYouTube. Cherekedza uye uwane zvakanakisa kubva pane izvi zvinoshamisa zvishandiso.
Imwe yeakanakisa Anwendung iyo inogona kukubatsira iwe kuwana vatsva vatsva paYouTube iri chaizvo TubeMine. Kuburikidza nechishandiso ichi iwe unozokwanisa kupa kukurudzira kukuru kune chiteshi chako, uye chakanakisa pane zvese ndechekuti ichave iri pfupi nguva.
Izvo hazvizove zvakakosha kutenga vateveri. Iyo nzira yekushanda kwechishandiso ichi inowanzo kuve ne vagovana mavhidhiyo edu neavo vari chikamu chenharaunda ino. Kana tichida kugovana vhidhiyo isu tinoda "mari" yaunogona kutenga kana kuwana nekutarisa mavhidhiyo evamwe vashandisi veapp.
Ichi chishandiso chinoshamisa hachikwanise kushaikwa kubva pane yedu runyorwa. Kutenda kwazviri, isu tichawana vazhinji vanyoreri, vanofarira uye makuru maonero mukati meiyo YouTube chikuva.
Inoshanda zvakapusa. Iwe unoteedzera vhidhiyo, kuteedzera iyi link muapp uye kugadzira kusimudzira kukwezva kutarisisa kwevamwe vashandisi. Kuti uite izvi iwe unozoda "mari" yaunowana nekutarisa zvirimo zvevamwe vashandisi.
UTViews - Maonero Ekusimudzira
Pano isu tinopa imwe yeakanakisa dzimwe nzira dzekutora vanyoreri kuYouTube zviri nyore uye nekukurumidza. Ichi chishandiso chinoshanda zvakafanana kune vamwe. Iwe unongofanirwa kugovana vhidhiyo yako muapp uye ivo vanozobatsira vamwe vashandisi kuzviona.
Uchadaro zvakare inoda mari yesimbi yekushandisa application. Iwe unowana iyi mhando yemubairo nekungo tarisa zvemukati izvo vamwe vashandisi vanoisa papuratifomu.
1 Kukura paYouTube hakusi nyore
2 Pamusoro akanakisa maapplication
2.3 UTViews - Maonero Ekusimudzira